ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
Lua error in မော်ဂျူး:Infobox_mapframe at line 81: bad argument #1 to 'sqrt' (number expected, got nil).
Rostov Oblast၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 47°14′N 39°42′E﻿ / ﻿47.233°N 39.700°E﻿ / 47.233; 39.700ကိုဩဒိနိတ်: 47°14′N 39°42′E﻿ / ﻿47.233°N 39.700°E﻿ / 47.233; 39.700
မြို့ status since
၃၄၈.၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၃၄.၆ စတုရန်းမိုင်)
၇၀ မီတာ (၂၃၀ ပေ)
• ခန့်မှန်း (ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၄)
၃၁၀၀/km၂ (၈၁၀၀/sq mi)
ရပ်စတော့ဗ် အော့ဗလတ်, Rostov-na-Donu Urban Okrug
ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့(ရုရှား: Росто́в-на-Дону́, tr. Rostov-na-Donu, IPA: [rɐˈstof nə dɐˈnu])သည် ရပ်စတော့ဗ် အော့ဗလတ်(Rostov Oblast)နှင့် တောင်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ခရိုင်(Southern Federal District)တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုဗဟိုဖြစ်သည်။ အရှေ့ဥရောပကျောက်လွှာကြီး၏ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဒွန်းမြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး အဇော့ပင်လယ်နှင့် ၃၂ ကီလိုမီတာ (၂၀ မိုင်) မျှသာ ကွာဝေးသည်။ မြို့၏ အနောက်တောင်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးဒေသသည် ဒွန်းမြစ်ဝှမ်းနှင့် ထိစပ်၍ နေလေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Ref133
↑ ၃.၀ ၃.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named gr
↑ ၄.၀ ၄.၁ Charter of Rostov-on-Don, Article 35.1
↑ Official website of Rostov-on-Don. Biography of Zinaida Vasilyevna Neyarokhina Archived3July 2018 at the Wayback Machine., the Head of Rostov-on-Don (ရုရှား)
↑ About the City (in ru)။ Official website of Rostov-on-Don။ August 13, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Rostov Oblast Territorial Branch of the Federal State Statistics Service. Cities with Populations of 100,000 and Over Archived2July 2017 at the Wayback Machine. (ရုရှား)
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Ref871
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရပ်စတော့ဗ်_နာ_ဒန်နူမြို့&oldid=738175" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၅:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။